केपी ओली मेरो आइडल, भविष्यमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्छु : श्रृखला खतिवडा (भिडियोसहित) | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार १ आईतवार, ०३:०३
केपी ओली मेरो आइडल, भविष्यमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्छु : श्रृखला खतिवडा (भिडियोसहित)
२०७५ पुष २२ गते प्रकाशित, l १९:१४
श्रृखला खतिवडा, मिस नेपाल
नेपालमा हुँदै आएको मिस नेपाल यस वर्ष बढि चर्चामा रह्यो । विगतमा मिस नेपालको विरोध गर्ने कम्युनिष्ट दल र नेता थिए । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीका नेताकी छोरी नै मिस नेपाल छिन् । यसले नेपालमा परिवर्तन भइसक्यो भन्ने स्पष्ट पारेको छ । यतिमात्रै होइन मिस नेपाल २०१८ श्रृखला खतिवडाले मिस वल्र्डमा सहभागि भएर पाएको सफलताले मिस नेपालको महत्व नै बढाइदिएको छ । यसै सन्दर्भमा ऋषि धमलाले मिस नेपाल खतिवडासँग अन्तरवार्ता लिएका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्का लागि गरिएको कुराकानी भिडियोसहति यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईको सुन्दरता र वौद्धिकताको राज के हो ?
यो सबै मलाई तपाईहरुले हेर्ने आँखाका कारण भएको हो । सुन्दरताले मानिसको आँखा तान्छ । सबैको आँखाले मलाई हेरिसकेपछि वौद्धिकताको पनिआवश्यकता पर्छ । यि दुई पक्षलाई लिएर मलाई सबैले मायागर्नुभएको छ । वास्तवमै म सबैप्रति ऋणि छु ।
मिस नेपाल बन्छु भन्ने सोच्नुभएको थियो ?
सपना देखेकीथिएँ । तर योग्य छु र ?भन्ने लाग्थ्यो । तर योग्यपनि रहेछु । भाग्यले पनि साथदियो ।
तपाईलाई किनमिस नेपालबन्ने चाहनाथियो ?
मिस नेपालभन्ने वितिकै ग्ल्यामरको रुपमामात्रै हेरिन्थ्यो । मिस नेपालप्रति हेर्ने दृश्टीकोण परिवर्तन गर्न मन थियो । मिस नेपालको स्कोप धेरै थियो । त्यो स्कोपलाई भरपुर प्रयोग गरेर नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन सक्छुजस्तो लागेको थियो ।
मिस नेपालको यात्रा कसरी सुरु भयो ?
म सुन्दर र राम्री छु भनेर मिस नेपालमा सहभागिभएको होइन । अरु कुरामापनि मेरो क्षमता छ भन्ने लागेर मिस नेपालमा सहभागिहुने सोच बनाएँ । २५ जनामध्ये पनिम सबैभन्दा सुन्दर थिएँ जस्तो लाग्दैन । सुन्दरतापछि के भन्ने कुरा पनि सोचेँ । मिस नेपालको फर्म खुल्नुअघि ध्यान केन्द्र गएँ । ध्यानले मलाईउत्साहथपिदियो । त्यसपछिमिस नेपालको यात्रा सुरु गरेँ ।
मिस नेपालमाजाने विषयमा घरमा के कस्तो सल्लाहहुन्थ्यो ? कसरी मनाउनुभयो ?
मैले आमालाई भनिरहन्थेँ । तर आमाले जिस्किएको ठान्नुहुन्थ्यो । फर्म नै भरेर बुझाएको थाहा पाएपछि विश्वास गर्नुभयो । अनिबुबालाई आमाले नै फकाइदिनुभयो । मैले धेरै कसरत गर्न परेन ।
मिस नेपालपछि मिस वल्र्डमाजानुभयो । त्यहाँपनि ठूलो सफलतामिल्यो । यो सफलतामाकसको सहयोग महत्वपूण रह्यो ?
सम्पूर्ण नेपालीहरुको साथ छ । म त एउटा प्रतिनिधीपात्रमात्रथिएँ । मलाई सफलबनाउन नेपालीदाजुभाई दिदीबहिनीहरुको भूमिका छ । त्यसबाहेक मेरो परिवार त छदैछ । आमा, बुबा, हजुरबा, दाजु सबैको भूमिका म बयानगर्नै सक्दिन ।
अब देश र जनताको निम्ती के गर्न सक्नुहुन्छ ?
मलाई देश र जनताको हितमा धेरै कामगर्ने इच्छा छ ।